JEMES 2 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (JEM 2)
Ụmụnna m, ebe anyị nile bụ ndị kweere nꞌOnyenwe anyị Jisọs Kraịst onye dị ebube, ka anyị hapụ ile mmadụ anya nꞌihu, si otu a na-akpa oke.
Dị ka ihe ịma atụ, ọ bụrụ na onye ọgaranya yi uwe mara mma, yikwara mgba nꞌaka e ji ọlaedo mee na mkpisi aka ya, abata nꞌụlọ nzukọ unu, ọ bụrụkwa na nwa ogbenye abata nke yi uwe na-adịghị ọcha,
ọ bụrụ na unu elee onye ọgaranya ahụ anya sị ya, “Bịa nọdụ nꞌotu oche e debere iche nꞌihi gị,” ma unu asị onye ogbenye ahụ, “Di anyị, i nwere ike iguzo nꞌebe ahụ,” ma ọ bụ “Bịa nọdụ ala nꞌebe a ụkwụ m dị,”
ọ bụ na unu esitebeghị nꞌụzọ dị otu a gosi na unu nabatara otu onye karịa ibe ya? Nke a o gosikwaghị na unu abụrụla ndị ikpe nwere echiche ọjọọ?
Geenụ ntị ka m gwa unu ụmụnna m, ọ̀ bụ na unu amataghị na Chineke ahọpụtala ndị ahụ ụwa gụrụ dị ka ndị ogbenye mee ha ka ha bụrụ ọgaranya site nꞌokwukwe ha, ka ha ketakwa alaeze ahụ Chineke kwere nkwa inye ndị hụrụ ya nꞌanya?
Ma gịnị ka unu na-eme? Unu na-akparị ndị ogbenye! Ọ̀ bụghị ndị ọgaranya na-apụnarị unu ihe unu nwere? Ọ̀ bụkwaghị ha bụ ndị na-adọkpụgharị unu aga nꞌụlọ ikpe? Ọ̀ bụghị ha bụ ndị na-ekwulu aha ọma nke Onyenwe anyị?
Ma ọ bụrụ na unu anabata otu onye jụkwa onye nke ọzọ, unu na-eme mmehie. Nꞌebe iwu dịkwa unu bụ ndị na-emebi iwu.
Nꞌihi na onye ọ bụla debere iwu nile ma daa nꞌotu, dara iwu dị ka a gaasị na ọ bụ iwu nile ka o mebiri.
Nꞌihi na Chineke ahụ sịrị “Akwala iko” bụkwa onye sịrị “Egbula mmadụ”. Ya mere, ọ bụrụ na ị kwaghị iko ma i gburu mmadụ, ị bụ onye na-emebi iwu.
Ya mere, na-ekwunụ okwu, ma na-ebikwanụ ndụ dị ka ndị a ga-ekpe ikpe site nꞌiwu ahụ na-eme ka mmadụ nwere onwe ha.
Nꞌihi na Chineke agaghị emere onye ọ bụla ebere nke na-adịghị emere onye ọzọ ebere. Ma ọ bụrụ na unu emeere ndị ọzọ ebere, matanụ na ebere Chineke nꞌebe unu nọ ga-adị ukwuu karịa ikpe ọmụma ya.
Olee utu ọ bara ụmụnna m, na mmadụ kpọrọ onwe ya onye nwere okwukwe nꞌime Chineke, ma ọ bụrụ na ndụ ya na omume ya adakọtaghị nꞌihe ọ na-akpọ onwe ya? Ụdị okwukwe ahụ ọ̀ pụrụ ime ka Chineke nabata ya?
Ọ bụrụ na i nwere enyi nke bịakwutere gị, nke mkpa nri na uwe ọ ga-eyi na-akpa,
Nꞌụzọ dị otu a, okwukwe gị nꞌime Chineke abaghị uru, ma ọ bụrụ na ndụ gị na omume gị egosighị ihe ndị a nile.
Mmadụ pụrụ ịgwa m sị, “I nwere okwukwe ma e nwere m ọrụ ọma.” Ma ihe m ga-asa onye ahụ bụ nke a, “Zi m otu i siri nwee okwukwe nꞌime Chineke mgbe ị na-arụghị ọrụ ọma ọ bụla iji gosi ya, ma mụ onwe m ga-egosikwa gị na m bụ onye nwere okwukwe nꞌime Chineke site nꞌọrụ ọma m naarụ.”
Onye nzuzu, ruo olee mgbe ka ị ga-amụta na ọ bụ nanị site nꞌọrụ ị rụrụ ka ị pụrụ igosi na i nwere okwukwe nꞌime Chineke.
Leenụ Eberaham nna anyị ochie, gịnị mere Chineke jiri gụọ ya nꞌonye ezi omume? Ọ̀ bụghị nꞌihi ihe o mere? Ọ̀ bụghị nꞌihi na o duuru Aizik chọọ iji ya chụọra Chineke aja?
Site na nke a ka anyị jiri mata na okwukwe o nwere nꞌime Chineke gosiri onwe ya nꞌọrụ ọma ọ rụrụ. Ọ bụkwa ọrụ ọma ya mere ka okwukwe ya zuo oke.
Ọ bụ site na nke a ka ihe e dere nꞌakwụkwọ nsọ jiri mezuo, nke na-asị, “Eberaham kweere na Chineke, ma Chineke nꞌonwe ya ebe ọ bụ na Eberaham rubeere ya isi, gụrụ Eberaham nꞌonye ezi omume, kpọọkwa ya ‘Enyi Chineke.’ ”
Rehaab, nwanyị akwụla ahụ, bụkwa otu onye anyị ga-eji maa atụ. A zọpụtara ya nꞌihi ihe o mere. O lekọtara ụmụ Izirel bịara iledo obodo Jeriko anya. O gosikwara ha ụzọ ha siri gbapụ!